PES သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ Konami သည် eFootball ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
စစ်မှန်သောကစားသမားများထက်လှုပ်ရှားမှုများစွာကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်အချိန်နှင့်တပြေးညီတိကျမှန်ကန်မှုကိုရွေးချယ်စဉ်ကာတွန်းများစွာဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။eFootballသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်၊သို့သော်ပေးဆောင်ရသောDLCကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။ဂိမ်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သော်လည်းKonamiကအခြားပါဝင်မှုနှင့်ဂိမ်းစနစ်များကိုလွှတ်တင်ပြီးသည့်နောက်တွင်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။မထင်မှတ်သောအချက်များမှာအချို့သည်အားသွင်းစရာဖြစ်သည်။နောင်အနာဂတ်တွင်အချို့သောကစားနည်းများကိုDLCအဖြစ်ရောင်းချလိမ့်မည်။", အယ်ဒီတာမှသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်နိုင်ပါသလား။ MyClub၊ FIFA Ultimate Team ၏ PES နှင့်ညီမျှသောသို့မဟုတ် Master League ၏စီးပွါးရေးပုံစံအကြောင်းမဖော်ပြရသေးပါ။ သို့သော်ဤဂိမ်း mode သည်နောက်ပိုင်းတွင်ပေးချေသော DLC အနေနှင့်ရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်သည်။ သို့သော် ဂိမ်းသည်ရာသီသစ်အတွက်နှစ်စဉ်အခမဲ့ update များကိုလက်ခံရရှိနေ ဦး မည်ဖြစ်သည်။ Kon> ကဂိမ်းနှင့်အွန်လိုင်းမုဒ်များတွင်ကြေငြာချက်အသစ်တွေပြုလုပ်လိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။eFootball ကိုသြဂုတ်လကုန်တွင် (Gamescom 2021 နှင့်တူညီသည်) ။ ယခုဆောင်းရာသီတွင်ဂိမ်း၏ဗားရှင်းအားလုံးသည် Cross-play လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိလိမ့်မည်။ သို့သော် mobile gamers သည် console နှင့် PC gamers
နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန် Controller များကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်
အဓိကပြိုင်ဘက်ဖြစ်သော FIFA သည်၎င်း၏ source code ကို hack လုပ်ပြီးမှောင်မိုက်သောဝဘ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ရောင်းချခဲ့သည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။
2021-07-21 17:15:13 | ဗီဒီယိုဂိမ်းများ...
Netflix ဟာမကြာခင်မှာထုတ်လွှင့်နိုင်တဲ့ video game ကိုစတင်တော့မှာပါ။ ဤမဟာဗျူဟာအသစ်သည် Netflix ၏ကာလကြာရှည်စွာတည်ရှိခဲ့သော cloud ဂိမ်းဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်လိုသည့်ဆန္ဒကိုထင်ဟပ်ပြသည်။ လက်ရှိတွင်အပြည့်အဝတိုးချဲ့နေပြီးတိမ်တိုက်ဂိမ်းများသည်ကဏ္ heavy ၏ဟဲဗီးဝိတ်များနှင့်ကောင်းစွာနေရာယူထားပြီးဖြစ်သည်။ ကျနော်တိ...
ကျဆုံးသောယောက်ျားများများ - ရာသီ ၅ တွင်ပိုမိုတောင့်တင်းမည်ဟုကတိပေးသည်။
2021-07-20 03:51:03 | ဗီဒီယိုဂိမ်းများ...
Fall Guys သည်ယခုရာသီတွင်၎င်း၏အသစ်သောရာသီကိုတိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေမှုတွင်ပြသလိုက်သည်။ အစီအစဉ်တွင်၊ ဂိမ်းသည်နွေရာသီ၏အရောင်များကိုစိမ်းလန်းစိုပြေနေသောတောတွင်း၏စိတ်နှလုံးထဲသို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုတိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့်ကြာပါသည်။ ယခုရာသီ၏အသစ်အဆန်းများအားရှာဖွေပါ။ ၎င်းကိုဇူလိုင် ၂၀ မှအခမဲ့ရရှိနိုင်သည်အောင်ပွ...
Steam Deck: သင်သည် Apex Legends သို့မဟုတ် PUBG ကဲ့သို့သောဂိမ်းများကိုကစားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
2021-07-19 21:52:18 | ဗီဒီယိုဂိမ်းများ...
Steam Deck တွင် Right Click - Credit: Steam / Valve Valve သည်မည်သူမျှမျှော်လင့်မထားသည့်အတိုင်း Valve သည်သူတို့၏ console Steam Deck ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Nintendo Switch နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မလွယ်ကူပါ။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်၎င်း၏အတွေးအခေါ်ကိုပဲ့တင်ထပ်နေသောယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။ Steam ကုန်းပတ်သည်ထင်ရှ...
စူပါမာရီယို Bros. (၃) id Software မှတီထွင်ထားသော PC port သည်ပြတိုက်သို့ရောက်သည်
2021-07-15 22:52:18 | ဗီဒီယိုဂိမ်းများ...
၁၉၉၀ တွင် Quake, DOOM နှင့် Wolfenstein ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အတွက်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိရှိသော id Software သည် Nintendo ကို Super Mario Bros ၏ PC port တစ်ခုရောင်းချရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ၃။ စတူဒီယိုသည်ပလက်ဖောင်းဂိမ်း၏ရှေ့ပြေးပုံစံကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, Nintendo ကသူ့ရဲ့ PC ရဲ့ port flagship game ကိုချက်ချင်းငြ...
Netflix သည် Cloud Gaming သို့စတင်ရန်နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကုမ္ပဏီများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အဆင်သင့်ရှိသည်
2021-07-15 15:26:13 | ဗီဒီယိုဂိမ်းများ...
Netflix နှင့် cloud ဂိမ်းများမကြာမီလာတော့မည်။ လွှင့်ထုတ်လွှင့်သည့်ကုမ္ပဏီကြီးသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ပထမပိတ်ဆို့မှုအတွင်းစာရင်းသွင်းသူအရေအတွက်သန်း ၂၀၀ ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ Netflix သည်၎င်း၏အဓိကပစ်မှတ်ဈေးကွက်တွင်အရှိန်အဟုန်ကို ဆက်လက်၍ ဒစ္စနေး + မြင့်တက်မှုကိုရင်ဆိုင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဒါပေမယ့်အမေရိကန်ကုမ္ပဏ...
Electronic Arts hack: hackers များသည်ရွေးနုတ်ဖိုးပေးရန်ဒေတာများကိုထုတ်ဝေသည်
2021-07-15 11:15:28 | ဗီဒီယိုဂိမ်းများ...
ခိုးယူထားသောအချက်အလက်များကို Electronic Arts သို့ရောင်းချရန်ကြိုးစားပြီးနောက်မှောင်မိုက်နေသောဝက်ဘ်ပေါ်တွင်ဟက်ကာများကသူတို့၏နည်းဗျူဟာကိုပြောင်းလဲလိုက်သည်။ သူတို့ကအခုဆိုရင်အွန်လိုင်းအချက်အလက်များ၏အတိုအထွာဝေမျှပေးသည်။ လူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ထားသောအချက်အလက်များ၏ခြိမ်းခြောက်မှုအောက်တွင်ရွေးနုတ်ဖိုးကိုမြုပ်န...
The Witcher Netflix ကြယ်ပွင့် Henry Cavill သည် Warhammer ၏ပရိသတ်ဖြစ်သည်
2021-07-15 01:21:13 | ဗီဒီယိုဂိမ်းများ...
ဟင်နရီကာဗေးသည်လူသိများသောကစားနည်းကိုနှစ်သက်သည်။ ပိုမိုတိကျစွာ PC gaming ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသူကိုယ်တိုင်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားသည့်ပီစီကိုတင်လိုက်သောအခါသူ၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သူသည် Warhammer စကြာ ၀ universeာ၏fanရာမပရိသတ်ကြီးဖြစ်သည့်အတွက်သူသည်ဂိမ်းကစားခြင်းကမ္ဘာအပေါ်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္...
PlayStation: Gran Turismo7အတွက် Sony က beta ကိုပြင်ဆင်နေသလား။
2021-07-14 16:38:54 | ဗီဒီယိုဂိမ်းများ...
မီဒီယာ GTPlanet ၏အဆိုအရဆိုနီသည်၎င်း၏အထင်ကရကားပြိုင်ကားလိုင်စင်ဖြစ်သော Gran Turismo7၏ beta ဗားရှင်းကိုပြင်ဆင်နေသည်။ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် PlayStation Experience site တွင်အနာဂတ်ဂိမ်းအတွက် beta အတွက်ကုဒ်တစ်ခုကိုခွင့်ပြုထားသည်။ ကစားစအသစ် Quest ကိုနှိပ်ပါ၊ ပြီးနောက် All-in tab သို့သွားပါ။ Italia Quest...
PS5: Gran Turismo7beta သည်ပေါက်ကြားပြီးဘာတွေဖြစ်နေသလဲ။
2021-07-13 15:03:39 | ဗီဒီယိုဂိမ်းများ...
Gran Turismo 7, ပြိုင်ပွဲဂိမ်းဂိမ်းအတွက်နောက်ထပ်အရစ်ကျ, သေးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲရှိသည်။ သို့သော် Sony ကတစ်စုံတစ်ရာတက်လာပုံရသည်။ Gran Turismo7၏ beta ကိုမကြာမီ PS5 တွင်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်။ ဒီလိုင်စင်နှင့်အခြားမော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းများကိုအထူးပြုသည့် GTPlanet ဆိုက်သည်ဒီရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏နောက်ကွ...
Gran Turismo 7: မကြာခင် PS5 ကို beta လုပ်တော့မလား။
2021-07-13 04:57:33 | ဗီဒီယိုဂိမ်းများ...
Super Mario 64 အရာတစ်ခုကိုဒေါ်လာ ၁.၅ သန်းနဲ့ရောင်းချခဲ့တယ်
2021-07-12 19:07:13 | ဗီဒီယိုဂိမ်းများ...
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေါ်လာ ၁၁၀, ၀၀၀ အထိရောက်ရှိခဲ့သော The Legend of Zelda ၏ပထမဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှအရာတစ်ခုကိုလေလံတင်ခဲ့သည်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်းသည်ဒေါ်လာသန်းတစ်ရာနီးပါးသို့တက်ခဲ့ပြီးဇူလိုင် ၉ ရက်တွင်ဒေါ်လာ ၈၇၀, ၀၀၀ ဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်။ ထိုအရောင်းသည်အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်းချိုသာသေ...
Sega Astro City Mini နှင့်အတူ Arcade အခန်းများ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုခံစားကြည့်ပါ
2021-07-10 07:44:41 | ဗီဒီယိုဂိမ်းများ...
Astro City Mini သည် Nintendo မှ NES Classic Mini နှင့်အတူလူကြိုက်များသော retro mini console လမ်းကြောင်းကိုစီးနင်းနေသည် (အခြားထုတ်လုပ်သူများကဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်မှုထဲသို့ဝင်သွားကြသည်) ။ ဤသည်မှာဂျပန်လောင်းကစားခန်းမများ၌ပထမဆုံးအကြိမ်ပေါ်ပေါက်လာသည့် Arcade စက်၏အိတ်ဆောင်ဗားရှင်းဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးသောဂိမ်းတစ်ခု...
နောက်ဆုံးပေါ် pubg မိုဘိုင်း update တွင် tesla တစ်ခုမောင်းပါ
2021-07-09 17:33:51 | ဗီဒီယိုဂိမ်းများ...
နာမည်ကျော် Battle Royale သေနတ်သမား PUBG Mobile သည် Tesla Model Y. မောင်းနှင်သူများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးသတင်းကိုထုတ်ဖော်ပြသလိုက်သည်။ Mission Ignition 1.5 ပွဲတွင် Elon Musk ၏ GigaFactory ပါ ၀ င်သည်။ ကစားသမားများအနေဖြင့်စက်ရုံစည်းမျဉ်းများပေါ်ရှိခလုတ်များအားလုံးကိုဖွင့်နိုင်သည်။ Tesla - Model Y "...
2021-07-09 13:12:05 | ဗီဒီယိုဂိမ်းများ...
တရုတ်အစိုးရအနေဖြင့်အရွယ်မရောက်သေးသူများနှင့်ကလေးသူငယ်များ၏ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲလမ်းမှုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်။ 2019 ခုနှစ်တွင်သူသည်ဗီဒီယိုဂိမ်းညမထွက်ရအမိန့်အဖြစ်အသက် 18 နှစ်အောက်လူငယ်များအတွက်ကစားရန်အချိန်ကန့်သတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ဤအကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာပြီးသောitsရာမ Tencent Games သည်၎င်း၏...
2021-07-09 00:53:48 | ဗီဒီယိုဂိမ်းများ...
လွန်ခဲ့သောအပတ်အနည်းငယ်ကအက်ပဲလ်သည်၎င်း၏ Arcade ၀ န်ဆောင်မှုကိုရယူသူများအားဂိမ်းသုံးခုထပ်မံထည့်သွင်းတော့မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် Angry Birds Reloaded၊ Alto's Odyssey နှင့် Doodle God Universe တို့ဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဂိမ်းအနည်းငယ်အပါအ ၀ င် "မကြာမီလာမည်" အပိုင်းတွင်အခြားခေါင...